मिडिया र जनताको आवाजले कारबाही रोकियो, न्यायको पक्षमा उभिने नेपालीप्रति आभारी छु – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
मिडिया र जनताको आवाजले कारबाही रोकियो, न्यायको पक्षमा उभिने नेपालीप्रति आभारी छु
लेखक : डा. शेरबहादुर पुन
प्रकासित : ९ बैशाख २०७७, मंगलवार
तपाईंलाई बिहीबारदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोजेको थियो, पत्र नै काटेको थियो, आज (आइतबार) मन्त्रालय कति बजे
मैले आफ्नो कुरा मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग प्रस्ट रूपमा राखेको छु । म १८ वर्षदेखि टेकु अस्पतालमा काम गरिरहेको छु । सरुवारोग बारे जनचेतना फैलाउने काममा निरन्तर बोलिरहेको छु । तर, मलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको छ । मैले हप्की–दप्की पटक–पटक खाँदै आएको छु । अहिले यो अवस्था आउन पनि मेरो दोष होइन । उहाँहरूकै हात छ । यो विषय मैले आज खुलेर भन्न पाएँ । सबैलाई थाहा छ, मलाई मन्त्रालय तानेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै मलाई दिन पठाएको पत्र फिर्ता भएको हुनुपर्छ, अर्को पत्र पनि त्यही कारण बनेको हो । तर, सुधारिएकै पत्र भए पनि मलाई मन्त्रालय बोलाउनु ठीक होइन, अझ समय त यो ठीक हुँदै होइन । यी सबै कुरा भनेपछि मन्त्री पनि गम्भीर हुनुभयो । योबीचमा उहाँले बाहिरको प्रतिक्रिया पनि बुझेजस्तो लाग्यो ।
ममाथि कारबाहीको तयारी भएको थियो भन्ने त मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि मिडियामा दिएका प्रतिक्रियाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ नि । डाक्टर भएर किन जान्ने हुने ? चेतना फैलाउँछु भन्दै किन बोल्ने ? आवश्यक परे मन्त्रालयका प्रवक्ता बोल्छन् भनेर त मिडियामा उहाँहरूले बोल्नुभएकै हो नि । छापिएकै छ नि । तर, यो महामारीका विषयमा विज्ञ डाक्टर नबोलेर को बोल्ने भन्ने मेरो अडान अहिले पनि छ । किनकि चेतना फैलायो भने संक्रमण रोकिन्छ, त्यसैले चेतना फैलाउनु त हाम्रो धर्म हो भन्ने मेरो भनाइ छ । महामारीका वेला निरन्तर बिरामी जाँचिरहेको डाक्टरलाई स्वागत गर्न त पत्र अवश्य काटिएको थिएन । तयारी त कारबाहीकै थियो । तर, आइतबार म मन्त्रालयमा पुग्दा स्थिति फेरिएको थियो । असाध्यै राम्रोसँग कुराकानी भयो । म मन्त्रालयमा पुग्दा धेरै कुरा मिलिसकेको रहेछ । यसलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँडेका हुन् । तर, अहिले हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेपछि मैले हुँदैन भन्ने कुरै भएन । मिलेर कोभिडविरुद्ध लडौँ, आपसमा नलडौँ त मैले नै भन्दै आएको छु । त्यसैले उहाँहरूको प्रस्तावलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ । तर, अब मिलेर अघि बढ्ने हो, कोरोनाविरुद्ध संगठित अभियानमा पहिलेजस्तै सक्रिय हुने हो । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र न्यायको पक्षमा बोल्ने नेपाली मिडियाप्रति म गर्व गर्छु ।
आगामी दिनमा पनि देश र जनताको स्वास्थ्यमा नियमित योगदान दिनेछु । जनतालाई नियमित सुसूचित गराउने कुरामा म निरन्तर
जनचेतना दिने विषयले यति ठूलो विवाद सिर्जना गर्यो, अब यस्ता विषयमा बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न ?